Uyilo oluhle kunye nokuSebenza】 Yongeza umbala kwindawo yakho yobugcisa obunobunkunkqele beCactus caddy! Ukugqibelela ukugcina iipensile, iikhrayoni, amanqaku ancangathi, isikere, iimpawu zokumisa ezomileyo nokunye okuninzi.
Ukwakhiwa kwe-Acrylic eyomeleleyo】 Yenziwe ngepeyinti yendalo engenatyhefu yendalo kunye nepeyinti enobuhlobo kwindalo, ilungele umntu omdala okanye abantwana abaneminyaka emi-3 +.
【Akukho mfuneko yokuhlangana】 Ungayibeka e-ofisini, kwigumbi lokufundela, kwitafile engento, kwiziko lobugcisa, kwigumbi lokulala..Oku kuye kwenza ukuba wehlise izikhongozeli kwaye uzilungiselele ngcono.
Cho Ukhetho olugqibeleleyo lweZipho omes Iza ekupakishweni kwebhokisi yesipho eqinileyo, esona sipho silungileyo sootitshala, abafundi, amakhwenkwe amancinci kunye namantombazana.
【Gcina idesika yakho icocekile pot Ibhotile yeepensile enemibala egcina iipeni, iipensile kunye nokugcina indawo yedesktop yakho igcwele kwaye icocekile.
Ibhotile yewayini yamaRoma eyi-1000ml
Ukubonisa eyona wayini yakho, iwhiskey okanye utywala kule decanter iyilwe kakuhle
IStopper singena ngokugqibeleleyo kumphezulu wedesika yokutywina umoya ukuthintela ukuvezwa kakhulu kwioksijenizi / ibranti, utywala okanye ivodka
Yenziwe ngomgangatho ophezulu, iglasi engqindilili yokumisa iglasi
Ukongezwa okufanelekileyo kwibar yakho yasekhaya kunye nokwenza isipho esihle kuwo nawuphi na umsitho okhethekileyo
Isiphatho sesibane seglasi enombala
Izinto zeMveliso: iglasi, ityebile kwaye yomelele.
Umbala weMveliso; pinki, amber, khuhla nje ngelaphu elimanzi elicocekileyo okanye ungeze isixa esincinci sesepha ukunqanda ukukhanya kwelanga ixesha elide.
Ukubekwa kwemveliso: igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, isifundo, esibekwe kwikona yekona yimpahla yendlu ye-chic, eyila imeko yothando lwasekhaya.
Uyilo lweMveliso: Ukukrola kuethe-ethe, isiseko sishinyene kwaye sizinzile, kwaye isiphatho sesibane asisiyomhombiso kuphela kodwa ikwayindlela yobomi.
I-1000ml yeglasi yokugcina itanki ebonakalayo
Izinto -Izixhobo zeglasi ezingenazikhokeli, ezicocekileyo nezingafihlisiyo, ezisempilweni kunye nezinobuhlobo kwindalo, zinokugcina indawo eninzi ekhitshini nakwikhabhathi yakho, ngaloo ndlela kufezekiswa umbutho wasekhitshini ongcono;
♦ Yigcine intsha kwaye ingenamanzi-Uyilo lwesiciko sentsimbi esenziwe ngentsimbi songeza ukusebenza kokutywina kokutya ukugcina ukutya kukutsha kwaye kungangeni manzi;
Izinto eziguquguqukayo- Isikhongozeli sokugcina ukutya ekhitshini sikulungele ukugcina izinto ezahlukeneyo, kubandakanya iilekese, amandongomane, iziqholo, ioyile, iisiriyiti, iibhiskithi, iti, umgubo wobisi, ipasta, iimbotyi zekofu, njl.
Occasions Sebenzisa amaxesha - Unokusetyenziswa kwiivenkile eziluncedo, iikhefi, iikhitshi zasekhaya, njl., Ezisetyenziswa kakhulu;
Izinto zokuthambisa zokuhamba eziyi-100ml zibhotile
Iziqulatho ezintle ze-chic zezithambiso
Ingqiniba engenanto engena ngokuthoba ingqayi kunye neBhotile yokuGcina eyiBhotile
Ukufezekisa isampulu okanye ukugcina izithunzi zamehlo, izithambiso, iikhrimu kunye nezinye izinto zokuthambisa.
Ukusebenza ngokutywina okuhle, ukhuseleko kunye nemigangatho esemgangathweni.
I-100ml khrimu epholileyo ibhotile ngokwahlukeneyo
Zilungile kwizithambiso, into yokuthambisa, umgubo kunye namafutha okuthambisa.
Iziciko zineesangqa ezintle, zodidi, ezintle zesilivere.
Yenziwe ngeplastropylene yeplastiki yokutya (i-BPA-Simahla)
Ukufezekisa kakuhle ukuhamba, kwaye kufanelekile ngokufanelekileyo kwisipaji sakho.
Iglasi egcinwe kwibhotile yeoyile efanelekileyo ye-10 ml ye-20 ml ye-30 ml ye-50 ml
Le mveliso ixhasa: isilika, ukunyathela okushushu, ukubanda, ukutshiza, inkqubo elapha ngasentla ifuna ukuba umthengi abonelele ngombhalo wesandla, ixesha lokuhanjiswa ziintsuku ezisi-7 ukuya kwezi-10, iimpazamo ezincinci, umahluko wombala, njl. Akunakuphetshwa, nceda unxibelelane nomthengi inkonzo ngeenkcukacha